​गगन थापालाई टक्कर दिने राजन भट्टराई भन्छन्– ‘व्यक्तिगत हिरोइजमको संसदमा केही काम छैन’
Sunday, 12 Nov, 2017 2:09 PM
यतिबेला मुलुकमा चुनावी सरगर्मी ह्वात्तै बढिरहेको छ । चुनावी रौनक धेरै छाएको मध्ये काठमाडौ क्षेत्र नं.४ पनि हो । यस क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापा र एमालेका युवानेता डा. राजन भट्टराईबिच कडा प्रतिश्पर्धा देखिएको छ । गगनथापासँग चुनावी मैदानमा होमिएका भट्टराईलाई न्यूजसेवाले चुनावी प्रचार अभियान बारे केही प्रश्न गरेको छ ।
चुनावी प्रचार अभियान कसरी अघि बढिरहेको छ ?
चुनावी प्रचार अभियान अहिले एकदमै तिब्रताका साथ भइरहेको छ । हाम्रो अभियान टोल भेला, विभिन्न व्यक्तिसँगको भेटघाट, घरदैलो जस्ता कार्य गरिरहेका छौँ ।
दिनमा कति घण्टा प्रचारमा बिताउनु हुन्छ ?
म त मुलभुत रूपमै प्रचारप्रसारमै छु । बिहान साढे ५ बजेदेखि बेलुका १०–११ बजेसम्म हामी चुनावी प्रचार अभियानमा छौँ । हाम्रो संगठनात्मक संरचना छ । उहाँहरुले आफ्नै किसिमले काम गरिरहनुभएको छ । पहिले त उहाँहरुले बोलाएका बैठक तथा कार्यक्रममा जान्थे तर अहिले त गइराख्नु पर्देन । हामीले क्षेत्रीय निर्वाचन कमिटी, त्यसपछि प्रादेशिक कमिटी, वडा कमिटी, वडाले पनि कमिटी बनाएर कार्यालय राखेरै आफ्नो काम सुरू गरिसकेका छन् । टोलटोलमा प्रचार कार्यालय बनिसकेको छ । टोलटोलले संयुक्त रूपमा ब्लक ब्लक छुट्याएर प्रचार गर्ने काम भइरहेको छ ।
घरदैलोलाई प्राथमिकता दिनु भएको छ कि आमसभालाई ?
हाम्रो बढि भन्दा बढि घरदैलो र व्यक्तिगत भेटघाटमै केन्द्रित छ ।
तपाईंले मतदातासँग मत मागिरहँदा दिने आश्वासन के–के हुन ?
मैले मुलभुत रूपमा दुई किसिमको प्रतिवद्धता जाहेर गर्ने गरेको छु । राष्ट्रिय राजनीतिमा हामीले खेलिरहेको भूमिका र हामी किन आवश्यक छौँ अहिलेलाई भन्ने कुरा यहाँहरुले बुझिदिनुपर्यो, संविधानलाई जोखाएर, त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर विकासको बाटोमा लैजाने, सम्वृद्धिको बाटोमा लैजाने एकमात्र पार्टी नेकपा एमाले हो । यो मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता, क्षेत्रीय अखण्डतालाई जोगाएर देशभक्तिको भावना बुझाएर लैजाने एमाले नै हो, यो कुरामा तपाईहरुले ख्याल गरिदिनुस् भन्ने गरेको छु । अर्को कुरा स्थानीय तहका विषयहरुमा । आफुले पाउनुपर्ने न्यूनतम कुराहरु पनि जनताले पाएका छैनन् यो क्षेत्रका जनताले । बाटोघाटोको अवस्था अत्यन्त भयावह छ । ट्राफिक जामको समस्या अत्याधिक छ । सार्वजनिक यातायातको भयावह छ । खानेपानीको समस्या छ, ढलको भद्रगोल छ । धोविखोला करिडोर सम्पन्न नभएर बेहाल छ । धोविखोला फोहोर अस्तव्यस्त छ । यिनै समस्या समाधान गर्ने मैले प्रतिवद्धता जनाउने गरेको छ ।
मतदाताले तपाईंलाई सबै भन्दा धेरै सोध्ने प्रश्न र गर्ने गुनासो के हो ?
मलाई सोध्ने प्रश्नहरूमा मैले हामीले भर्खरै स्थानीय तहमा जितेका र्छौँ । जनताका आधारभुत कुराहरुलाई सम्बोधन गर्न हामी बोलेअनुसारका काम अगाडि बढाउँछौ । स्थानीय तहबाट दिनसकिने साधन र स्रोत हामी स्थानीय तहबाटै गछौँ । स्थानीय तहबाट नपुगेको स्रोत साधन हामीलाई राष्ट्रिय रूपमा जिताएर पठाउनुहोस् । हामी त्यहाँबाट गछौँ भनेका छौँ । हाम्रो अबको काम भनेको जनताका आधारभुत कुरालाई सम्बोधन गर्दै मुलुकलाई सम्वृद्धिको बाटोमा लैजाने हो । यो कुरा नेकपा एमाले, वाम शक्तिको अगुवाइमा मात्रै सम्भव छ । किनभने विगतमा कांग्रेसले बहुमत पाएर पनि यो मामलामा केही गर्न सकेन । कांग्रेसले पटक पटक बहुमत ल्याए पनि उसले कहिले पनि स्थायी सरकार पनि नदिने, जहिलेपनि असफलतातिर मात्र लैजाने काम गरेको छ । यसपटक वामपन्थीहरूलाई अवसर दिनुस भन्ने गरेका छौँ । यो कुरामा जनताहरु अत्यन्त सकरात्मक पनि छन् ।
चुनावी घोषणापत्रबारे मतदाताको कुनै जिज्ञासा पाउनु भएको छ ?
स्वभाविक छ । उहाँहरुले तपाईहरुले लेखेको मात्र हो कि भोलि काम गर्ने पनि हो भन्ने उहाँहरुको प्रश्न छ । किनकी विगतमा त्यस्तो भयो । धेरै कुरा लेखिए । तर ति पुरा भएनन् । धेरै प्रतिद्धद्धता हुँदा पनि काम हुन सकेनन् । उहाँहरुले लेख्ने हो कि पुरा पनि गर्ने हो भन्ने प्रश्नमा हामी पुरा गर्ने पार्टी हौ । भनाई र गराईमा एकरुपता गर्ने हामी नै हौ भन्ने जवाफ दिन्छौँ ।
मतदाताको पहिलो रोजाई पार्टी हुँदोरहेछ या उमेद्वार ? के पाउनु भयो ?
पार्टी । यो पटक पार्टीलाई नै बढि रोजाइ गरेको मैले पाएको छु ।
मतमाग्न जाँदा अन्य प्रतिस्पर्धी दल र उमेद्वारको आलोचना गर्नुहुन्छ या आफ्नै कुरा राख्नु हुन्छ ?
मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने म अत्यन्तै स्वस्थ रूपमा प्रचार गरिरहेको छु । आफ्ना एजेण्डा राख्ने गरेको छु । अरुको टिकाटिप्पणी गर्दिन ।
अन्य प्रतिस्पर्धीको चुनावी प्रचार स्वस्थ छन् या आपत्तिजनक ?
हामी अत्यन्तै स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा गइरहेका छौँ । हाम्रो जेनेरेशनमा चुनाव भनेको, डेमोक्रसी भनेको भनेको कुरामा विकल्प दिनुपर्छ । डेमोक्रेसीको ब्युटी नै विकल्प खोज्ने हो । त्यो विकल्प खोज्न पाउने त्यो जनताको मताधिकार र उसलाई हामीले जनतालाई आफ्ना राम्रा कुरा भनेर जनताको मन जितेर मत लिउँ भन्ने मेरो उद्देश्य हो । सकरात्मक ढंगले जनतालाई लोकतन्त्रप्रति, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाबाट जनताको दैनिक जीवनमा ल्याउने परिवर्तनमा हामीले जोड्न खोजेका हौँ । त्यो विगतमा जोडिएनछ । त्यो नजोडिएको कारणले गर्दा जनता आफ्ना समस्याबाट निराश हुँदा व्यवस्थाप्रति पनि निराश भए । अब हामी यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।
हामीले हाम्रा विषयहरु हाम्रो लोकतन्त्र र यो प्रक्रियालाई जनताको जीवनसँग जोड्ने गरी हामीले लिएर जानुपर्छ । त्यो लैजान हामीले स्वस्थ हिसाबले लिएर जाउँ भन्ने मेरो प्रयत्न छ । तर मैले कता कता मेरा प्रतिष्पर्धा गरिरहेका साथीहरु अर्को ढंगले आउन खोजेको हो कि भन्ने लागिरहेको छ । म चाहान्छु यस्तो नहोस् । हामी अगाडिको जेनेरेशन भन्दा अलिक फरक देखाउनुपर्छ राजनीतिमा । फरक ढंगले जानुपर्छ भन्ने हामी हौँ भने हामीले त्यो खालको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन । व्यक्तिगत आरोप, प्रत्यारोपमा होइन । हामीले विशुद्ध आफ्ना कार्यक्रम र नीति लिएर जाउँ । आफुले गरेका कुराको प्रचार गरौँ । आफुले गर्न नसकेका कुराहरु औलाईंदिएको कुरालाई आरोप ठान्नु भएन । औलाईंएका कुरालाई मतदातालाई बुझाउन खोजिएको भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
दिनमा १६ घण्टा प्रचारमा व्यस्त गगन भन्छन्– पार्टी, युवा र महिला चुनाव जित्ने मेरा अस्त्र
सबै उमेद्वारहरुले चुनाव प्रचारप्रसार महँगो भयो भनेर गुनासो गरेको सुनिन्छ यहाँलाई कस्तो लागिरहेको छ ?
चुनाव महंगो हुँदै गएको यथार्थ हो । चुनावमा महंगो, खर्च अत्यन्तै बढ्दै गउको देखिन्छ । यद्यपी हामीजस्ता पैसा नहुनेहरु अब चुनावमा उठ्ने भन्ने गाह«ो हो कि भन्ने डरलाग्ने स्थिति पैदा भएको छ ।
चुनावी खर्च कसरी जुटाउनु भएको छ ?
चुनावी खर्च मैले हाम्रो पार्टीका सदस्य, सुवेच्छुकहरुबाट उठाइएको छ । त्यो भन्दा बाहेक अन्य सुभेच्छुकबाट सहयोगको अपेक्षा राखेको छु । यद्यपी उठिसकेको छैन ।
कुन तप्का र वर्गका मतदाताबाट यहाँलाई बढि आशा लागेको छ ?
मैले त सामान्यतया सबै वर्गको अपेक्षा गरेको छु । त्यसमा पनि मध्य र निम्न वर्गको बढि आउँछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ ।
मुख्य प्रतिस्पर्धी कसलाई ठान्नु भएको छ ?
नेपाली कांग्रेस । त्यसमा कुनै विवाद नै छैन ।
तपाईंको जितको आधार के हो ?
यो पार्टी सिस्टम हो । मैले जितेपनि, मेरा प्रतिस्पर्धीले जितेपनि पार्टीका नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्ने हो । व्यक्तिगत हिरोइजमको त्यहाँ केही काम छैन । पार्टी कस्तो छ, पार्टीले कस्तो नीति लिन्छ, गर्ने त्यहि नै हो । पार्टीले जसलाई प्रधानमन्त्रीको उमेद्वार बनाउने भन्छ त्यसैलाई भोट हाल्ने हो । मैले अर्कोलाई बनाउन मिल्दैन । त्यसकारण यसलाई पार्टी सिस्टममा जोड्नुपर्छ । मेरा जितका आधार भनेका एमाले र अहिले वाम गठबन्धनले लिएका एजेण्डा नै हुन् । राष्ट्रियताका विषयमा राष्ट्रिय रुपमा लिएको मुद्धा हो । त्यत्रो नाकाबन्दी भयो । नाकाबन्दीको न पनि उच्चारण गर्न नसक्ने प्रतिनिधिरु संसदमा हामीले पायौ । राजनीतिक दल पायौँ । भ्रष्ट्राचार गर्ने अख्तियार प्रमुखलाई महाअभियोग लगाउँदा महाअभियोग लगाउन नचाहने राजनीतिक दल पायौँ, भ्रष्ट्राचार विरोधी भएर अनियमितता रोक्नुपर्छ भन्दा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीसलाई महाअभियोग लगाउने राजनीतिक दल पनि देख्यौँ हामीले । आईजीपी प्रकरण, राजदुत प्रकरण लगायतका थुप्रै भ्रष्ट्राचारका प्रकरण यहिबीचमा भएका छन् । अगाडिको कुरा पजेरो संस्कृति, सांसद खरिद बिक्रीका त कुरै छाडौँ । यी सबै कुरा र राजनीतिक अस्थिरता र अस्थिरतामाथि संस्कारहीन र खराब संस्कार हामीले भोगेका छौँ ।
यी सबै समस्याको समाधान गर्न अहिले वामपन्थी गठबन्धनको बहुमत हुनुपर्छ भन्ने हो । दोस्रो स्थानीय तहको सन्दर्भमा यहिँको समस्या भयावह छ । यहाँको खानेपानी, बाटो, ढल, सार्वजनिक यातायात, ट्राफिक जाम, ध्वनी प्रदुषण, धुलो जस्ता समस्या छन् । महानगरमा बसेको नागरिक भन्ने अवस्था छैन । यी समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर हामीले छिटो भन्दा छिटो समाधानमा जानुपर्छ । यी नै मेरा मुद्धा हुन् र विगत ८–१० वर्षमा त्यसमा कुनैपनि प्रगति नभएको मैले पाएँ । अब हामी यसमा केही न केही काम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र मैले यसको अगुवाइ गर्छु । स्थानीय निर्वाचनमा हामीले राम्रो मत ल्याएका छौँ । स्थानीय तहका साथीहरुसँग समन्वय गरेर स्थानीय स्रोत साधनबाट र केन्द्रबाट बजेट पारेर हामी काम गछौँ । जनताको बीचमा जाँदा मेरो राम्रो तरिकाले हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त हुँदै गएका छौँ ।